सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा – Himal FM 90.2 MHz
सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा
बिचार – बिमर्श adminhimal March 27, 2020
सोलुखुम्बु, चैत्र १४
कोरोना भाइरस (कोभिड १९ )को संक्रमण यो समाचार लेख्दासम्ममा १९९ देशमा पुगिसकेको छ । यसबीचमा लाखौं मानिसहरु संक्रमित भएका छन् भने हजारौंको ज्यान गएको छ । यसबाट मुक्त हुनुको लागि प्रायः देशहरुले ‘लकडाउन्’को बाटो रोजिरहेका छन् ।
यो पृष्ठमूमिलाई नियाल्दा सेल्फ् क्वारेन्टाइन (घर)मा बस्दा कसरी बस्ने ? यो प्रश्न आम नागरिकको मनमा आउनु स्वाभाविक हो । घरमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु विश्व स्वास्थ्य संगठन [ WHO ] का प्रमुख अधानोम टेड्रोसले सार्वजनिक गरेका छन् ।
World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus givesapress conference on the situation regarding the COVID-19 at Geneva’s WHO headquarters on February 24, 2020. – Fears ofaglobal coronavirus pandemic deepened on February 24 as new deaths and infections in Europe, the Middle East and Asia triggered more drastic efforts to stop people travelling. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)
पालना गर्नुपर्ने नियमहरुः
१, स्वस्थ र पौष्टिक आहार खाने ।
जसले तपाईँको रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ठिकसँग कार्य गर्न मद्दत गर्दछ ।
२, मदिराजन्य पदार्थको सेवनलाई सीमित राख्ने । गुलिया पेय पदार्थहरु कम गर्ने ।
३, धुमपान नगर्नुस् । यदि तपाईँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भयो भने यसले गम्भीर रोगको जोखिम बढाउन् सक्छ ।
४, शारीरिक व्यायम गर्न नछुट्याउने । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डले भने अझैं वयस्कहरुले कम्तीमा दैनिक ३० मिनेट र बालबालिकालाई दैनिक १ घण्टा शारीरिक व्यायम गर्ने गराउने। यदि घरभित्रै ‘लकडाउन्’ अर्थात बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन् भने व्यायम गर्ने,नाच्ने,योगा गर्ने ।
घरकै भर्याङको सिँडीबाट तलमाथि गर्ने। यसले पनि तपाईँको व्यायम हुन्छ । काम गरिराख्नेले लामो समय एउटै आसनमा नरने । कम्तीमा हरेक ३० मिनेटमा ब्रेक लिने । घरमा कसरी स्वस्थ रहेर बस्ने भन्नेबारेमा हामी आउने दिनमा पनि सल्लाह दिनेछौं ।
५, तपाँईको मानसिक स्वास्थ्यमा ख्याल गर्ने । यो संकटको बेला तनाव अलमल र डराउनु सामान्य कुरा हो । यस्तो बेलामा तपाईँले आफ्ना चिनजान र विश्वासिला व्यक्तिससँग कुरा गर्ने । यस्तो बेलामा करुणा र सहयोग एक औषधि हो भन्ने कुरा नभुलौं । संगीत सुन्ने।
किताब पढ्ने । अथवा खेल खेल खेल्ने। यस्तो बेलामा धेरै समाचार नहेर्नुहोस् जसले तपाईँलाई तनाव दिन्छ । जानकारीका लागि विश्वसनीय माध्यमबाट दिनमा एक दुईपटक हेरे हुन्छ । स्रोतः BBC